Egwuregwu kachasị mma iji merie nrụgide | Gam akporosis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa gam akporo
Ọ bụ karịa gosipụtara na eji mobiles anyi abughi nani iji mee ma kpo oku. Ojiji anyị nwere ike inye anyị igwe na-adịwanye iche. Mana n'ezie ọtụtụ n'ime anyị kwenyere na ewezuga nnukwu ojiji, ntụrụndụ aghọwo otu n'ime ihe ndị kasị mkpa. Ugbu a, egosiri na ha na-alụso nrụgide ọgụ.
You na-echeta ihe ị mere tupu mgbe ị na-eche gị n'aka dọkịta, ma ọ bụ mgbe ị na-aba n'ụlọ ụgbọ ala mgbe enweghị smartphones? N’agbanyeghi n’agbanyeghi n’eziokwu, ekwentị anyị nwere ike ime nke a, anyị kwesiri ịmata nke ahụ Enwere ngwa na egwuregwu na-enyere anyị aka dị nnọọ na-abụghị, mgbochi-erughị egwuregwu.
1 Egwuregwu ndị kachasị mma ị ga-asị goodbye na nrụgide
3 Ohia m
5 Agwụcha Pinball
7 Egwuregwu egwu egwu
Egwuregwu ndị kachasị mma ị ga-asị goodbye na nrụgide
Ọ bụrụ na anyị na-achọ ngwa ngwa na-arịwanye elu nke ngwa na egwuregwu na Storelọ Ahịa Play, ịchọta nke kachasị mma bụ ihe siri ike. Maka nke a, na Androidsis anyị na-anwa imechi ọchụchọ ma mee ka ọrụ ahụ dịrị gị mfe. Taa anyị ewetara gị egwuregwu kacha mma, nke n'echiche anyị dị umeala n'obi, bụ ihe kachasị mma ichefu banyere nchegbu. Ọ dị mkpa ịchọta oge iji wepụ ihe ọ bụla, pụọ na usoro ọjọọ ahụ nke na-akpata nchekasị ma nwee obere ala nke ịdị jụụ.
Egwuregwu jikwaa ịdọpụ uche anyị, na ọtụtụ oge ha na-enyere anyị aka ichefu banyere nsogbu ndị gbara anyị gburugburu. Enwere ọtụtụ egwuregwu na ọtụtụ ụdị dị iche iche na ịchọta otu n'ime ha nke na-ejikwa zere nrụgide siri ike. Na nke a obere nhọrọ anyị na-eche chọta egwuregwu ahụ, n'agbanyeghị na ọ dị mfe ma ọ bụ nzuzu ọ nwere ike iyi, nke ahụ jisiri ike nye gị oge nkwụsị ahụ chọsiri ike.
Anyị ga-ekwenye na ọtụtụ oge, egwuregwu ahụ dị mfe ma dị mfe karịa ka ọ na-atọkwu. Anyị amaworị nke ahụ enwere egwuregwu na ihe osise dị egwu na egwuregwu dị egwu, ma taa nke ahụ abụghị ihe anyị na-achọ. Sandbox bụ egwuregwu zuru oke iji kwụpụ maka nkeji ole na ole ma hapụ uche gị. Na ikwu ihe, na nke a nke ọma, anyị nwere ike ịkọwa nke ahụ n'usoro nke imewe, Sandbox nwere ike ịbụ na opekata mpe nke okike ọ bụla. Eziokwu nke ga - eme ka onye ọrụ ghara ịdọpụ uche ya site na nkọwa ndị ọzọ ma jikwaa ịhapụ uche ya.
Jiri ha dị iche iche na iche iche ihe na Sandbox na-enye gị ka ịmepụta ụdị, tinye ihe mgbochi, ma ọ bụ mepụta akpa. I nwekwara ike iji snow, mmiri, asịd, ma ọ bụ ọbụna ugwu mgbawa. Mee ka mixes na-agaghị ekwe omume Kpughee echiche gị. Jiri ọdịdị kee ígwè osisi, iko, brik. Nke kachasị mma, Ọ bụrụ na ọ masịghị gị, mee ka ihe niile fee n’ikuku iji ihe mgbawa.
Egwuregwu n’ebughi ebum n’obi, n’enweghi ebum n’obi ma n’egwuregwu na-enweghị onye. Don't naghị emeri ihe ọ bụla ma ị gaghị efunahụ ya. A oge nke fun na ntụrụndụ dị mfe na-enweghị ihe ọ bụla nsogbu. Nkọwa dị oke mkpa bụ na ọ Baghị mgbasa ozi. Ọzọkwa, ị nwere ike igwu "off-line" ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ. Ọ bụrụ n’ịnwale ya, ịgaghị enwe ike ịkwụsị ịgbakwunye ihe ma mechaa mee ka ihe niile gbawaa.
Njikọ Play ụlọ ahịa - smellymoo.sand & hl
Egwuregwu ọzọ na kwere nkwa inye anyị oge udo na obi iru ala. Na My Oasis, ndị mmepe egwuregwu iji kwụsị nrụgide agabigala otu usoro n'usoro. Mgbe ị banyere My Oasis, anyị na-achọpụta nke ahụ ebe a bụ nnukwu imewe ọrụ na-enwu na-apụta ìhè. Anyị chọtara a oke nkọwa zuru oke na ọkwa zuru ezu. Otu ikuku nke ejiri nlezianya kee ka anyị wee mikpuo onwe anyị n'ime ya ma chefuo ndị ọzọ.
Oasis na a isi mmekọrịta egwuregwu. Relax mind your na-enwe gị Ọnọdụ Zen nke emepụtara iji nye udo nye ndị egwuregwu ahụ. Naanị metụta ihuenyo ma soro ụmụ anụmanụ na-emekọrịta ihe nke oasis gị. Nweta obi ma mee ka obere ụwa gị too ma gbasaa oke ya na anụmanụ ọhụrụ.
Ihe oyiyi, mmegharị, agba na egwu a haziri nke ọma iji mee ka ụbụrụ gị zuru ike wee chefuo, ọbụna nwa oge, banyere nrụgide. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụpụ site na ogologo ụbọchị na-arụ ọrụ, banye My Oasis ma mee ka gburugburu ya gbaa gị gburugburu ruo mgbe ị ga-ezumike. Oasis nke obi iru ala n'ime ama gi nke ahụ ga-adị mgbe niile.
Oasis My: Egwuregwu izu ike, izu ike & nchegbu nchegbu
Anyị na-aga n'ihu na egwuregwu ndị na-atụrụ ndụ nke na-enyekwa onyonyo mara mma ma lekọta anya nke ọma. Ike bụ a ụdị njikọ puzzle nke ahụ ga-agbagha echiche gị ma nwalee ikike ị nwere. Dị mfe dị ka mepụta eletrik eletrik nke na-enye bọlbụ ọkụ.
Anyị malitere isonye mfe ngalaba nke onu ogugu na uzo di nkpa iji nye ntughari aka na sekit. Na ihuenyo ọ bụla ihe na-agbagwoju anya anyị ga-arụkwa ọtụtụ ule na ule maka sekit zuru ezu iji jikọta ma rụọ ọrụ. Ebumnuche nke isonye n'akụkụ ọ bụla dị iche iche iji mepụta otu circuit ma ọ bụ ọtụtụ n'otu oge. Tinye ọgụgụ isi gị n’ule ma nwee nghọta n’ụdị niile iji nweta ìhè.
Un format dị mfe dị ka ọ bụ fun na-egwu. Na ụfọdụ adụ agba na ịchọ nlezianya ụda ya mere na nkeji ole na ole anyị nwere ike ichefu nchekasị ahụ ma mee ka sekit ndị ahụ rụọ ọrụ ma anyị nwere ike ịgbanye ọkụ ọkụ. Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ magburu onwe ya iji zere nsogbu n'ụzọ dị mfe. You ga - ada ada n’enweghị bulbs niile agbanye?
Ike: Mgbapu Nchegbu Mgbochi
E nwere ezigbo ihe ngọpụ na a chịkọtara egwuregwu ikwu banyere ụfọdụ egwuregwu pinball. Fewbọchị ole na ole gara aga anyị kwadoro egwuregwu kacha mma maka gam akporo. N'ime ha anyị kpọtụrụ aha Infinity Pinball. Mgbe ọtụtụ ụbọchị soro ya gwuo egwu, anyị nwere ịkwado ya ọzọ na nke a mgbochi nchegbu.
Egwuregwu na-adọta uche anyị ma na-ahapụ nrụgide kwa ụbọchị. A pinball na akwa nostalgic ochie aka n'ụzọ dị nnọọ aghụghọ. Na a gburugburu ebe obibi a mụọ nke ọma nke na-akpọrọ anyị n'ime a kpochapụwo arcade iji lekwasị anya n'ịkụ bọl na inweta akara kacha mma, ọ dịghị ihe ọzọ na obere.
Ihe pikselụ ahụ mara mma, na Infinity Pinball o jiri aka ya hapụ onwe ya ka ọ hụ ya na-echetara anyá »‹ nke egwuregwu arcade mbu ah. N'aga n'ihu n'etiti ọkwa, nweta mkpụrụ ego, gbalịa ụdị tebụl dị iche iche mgbe ị na-enwe obi ụtọ a pụrụ iche soundtrack ya mere ị na-echefu ihe ọ bụla ọzọ. Laghachi na afọ gị “igwe”, ma ọ bụ jiri nnwale gwuo egwu ndị nwere isi awọ.
Developer: Digital Ga Inc.
Ietda jụụ na udo adabaghị. A ahụmahụ enweghị atụ site na egwuregwu ọ bụla ọzọ que jisiri ike nye onye ọkpụkpọ ahụ obi iru ala nke igwe ojii. a njem owu ịbụ onye ọkwọ ụgbọ elu nke ụgbọ elu nke na-efe n'enweghị ntụzịaka doro anya na a ezigbo ụzọ dị mma.
A egwuregwu dị mfe dị ka ọ na-egbuke egbuke. Don't nweghị asọmpi megide onye ọ bụla, enweghi akara, ndekọ, ndorodoro. Naanị ihe ị ga - enweta na Loner bụ zuo ike na-efegharị n'ebe ọ bụla na a hypnotic ije nke n'ígwé ojii, Bilie a akpan deere soundtrack nke mere na uche gị nwekwara ike ife efe ma chefuo nsogbu gị nwa oge.
Loner nwere a egwuregwu pụrụ iche ma na ụzọ abụọ nke na-arụ ọrụ maka uzo. Ga-enwe ike ijikwa njikwa nke ụgbọ elu gị site swiping na ihuenyo ma ọ bụ site tilting na ama otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Na ụdịdị ọ bụla i nwere ike na-eche na ị na-ese n'elu mmiri. N'ihi a kpachara anya mara mma na ụzọ dị mfe iji webata onwe gị na gburugburu ebe obibi Onye na-etinye ego ga-eme ka ị lekwasị anya na mmegharị ya dị mma.
Gbalịa nọdu ebe ahụ ma tụgharịa dịka ụdị ahụ si dị ha na-egosi gị. Gaa na-emecha etoju ka tsar na gbalịa izere ihe mgbochi site n’inwe mmetụta ebumpụta ụwa nke egwú ahụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ udo nke udo site na ala, Loner ga-enyere gị aka ịhapụ ihe niile na-akpata nrụgide.
Ọ bụrụ n ’n’etiti egwuregwu ndị anyị kwadoro, ị chọtabeghị ihe ị na - achọ, anyị ga - enye gị ohere ikpeazụ. Gbanye otu App ị nwere ike ịchọta ngwugwu zuru oke nke egwuregwu nrụgide nrụgide. Enwere ọtụtụ nhọrọ maka otu ebumnuche, zuru ike ma hapụ uche gị oghere nwa oge.
Enwe obi ụtọ na uda nke ifufe na ngwo ngwo. Soro ya na-egwuri egwu bọket osisi, ghaa ájá o slide mkpịsị aka gị na mmiri. I nwekwara ike igwu ya Akwụkwọ Newton, pintar na nzu ma ọ bụ jiri ya ihe karịrị 100 ihe egwuregwu ụmụaka na ị ga-achọta. Enweghị ike ịchọta nhọrọ ndị ọzọ ọnụ na iche iche na egwuregwu ọ bụla ọzọ. Nweghị ihe ị ga-eme ma e wezụga ịchọta ụzọ ị ga-esi kwụpụ. Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ itinye nrụgide gị n'akụkụ, lee, ị ga - emesị nwee nhọrọ niile ị nwere ike.
AntiStress, izu ike, nchegbu & Nchegbu Enyemaka Egwuregwu
Developer: Egwuregwu Arcade Ọdịnaya
Y rue mgbe anyị nkwanye banyere egwuregwu izu ike na mgbochi nrụgide. Ọtụtụ nhọrọ ka ị nwee ike ịhọrọ ọtụtụ ma ghara ịkwụsị ịnwụ site na naanị otu nhọrọ. Nchegbu nwere ike ibibi otu ụbọchị ma anyị adịghị njikere ka nke ahụ mee. Nọdụ ala n’ebe dara jụụ, budata otu n'ime egwuregwu ndị a ma chefuo ihe ndị ọzọ. Oge erugo ịhapụ njikọ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwuregwu egwuregwu kachasị mma iji luso nrụgide ọgụ
Ngwa 5 kachasị mma iji lelee ma dezie akwụkwọ na gam akporo